Maxaa Ka Jira In Zinedine Zidane Uu Farqi Weyn U Dhaxeeyo Heerkiisa Tababare Ee Hadda Iyo Ka Hor Intii Aanu Shaqada Iska Casilin – Latest Sports News
Maxaa Ka Jira In Zinedine Zidane Uu Farqi Weyn U Dhaxeeyo Heerkiisa Tababare Ee Hadda Iyo Ka Hor Intii Aanu Shaqada Iska Casilin
Sagaal bilood ka hor ayuu shaqada tababarenimo joojiyey si uu waqti nasasho ah usoo qaato, laakiin bishan ayuu dib usoo laabtay oo uu isla kooxdii Real Madrid macallin u noqday.
Intii uu maqnaa Zinedine Zidane, Real Madrid waxa soo maray laba tababare oo aan hal xili ciyaareed wada dhamaysain, waana Julen Lopetegui iyo Santiago Solari oo la caydhiyey kaddib fashil guulo la’aan ah oo soo gaadhay.
Kulankii ugu horreeyey ee Zidane uu hoggaamiyey Real Madrid, waxay kusoo laabatay jidka guusha oo ay dhawr kulan oo xidhiidh ah ka maqnayd, waxaana uu 2-0 ku jiidhay Celta Vigo oo garoonka Santiago Bernabeu ay ku martigeliyeen.
Ciyaartan waxa uu Zidane safka koowaad kusoo bilaabay saddex laacib oo macallimiintii ka horreeyey ay iska naceen, waana Isco, Navas iyo Bale, iyaga ayaana noqday kuwa ugu dambayn guushan u keenay kooxda.
Goolka koowaad waxa dhaliyey Isco, midka labaadna Gareth Bale, halka goolhaye Navas uu sameeyey bandhig wanaagsan oo uu kubbado badan ka badbaadiyey shabaqiisa.
Kaddib ciyaartan, waxa durba Santiago Bernabeu ka bilaabmay dareen ah inay jidka guusha kusoo laabanayso, ayna usoo noqonayaan maalmihii farxadda ee xili ciyaareedkan ay ka caageen.
Haddaba, wargeyska Marca ee kasoo baxa magaalada Madrid ee dalka Spain ayaa daabacay qiimayn ku saabsan Zinedine Zidane iyagoo isku eegay waqtigii hore ee uu tababaraha u ahaa Real Madrid iyo soo laabashadiisa hadda.
Wargeysku waxa uu sheegay in Zidane uu hadda yahay tababare ka wanaagsan sidii uu markaas ahaa, isl amarkaana ay usoo kordheen wax badan muddadii uu dibedda joogay, waxaanay tusaale usoo qaateen qaabka uu durba kalsoonida ugu soo celiyey xiddigaha niyad-jabku haystay ee ay durba iskugu arkeen kuwo muhiim ka ah kooxda iyo inay guul heleen.
Si kastaba ha ahaatee, Zidane ayaa haysta fursad uu 11 ciyaarood oo xili ciyaareedka ka hadhay ku hoggaamiyo Real Madrid oo 12 dhibcood ka dambaysa Barcelona oo hoggaanka haysa, sidoo kalena 2 dhibcood ka hoosaysa Atletico Madrid oo kaalinta labaad ku jirta.